Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaalada Dalka Itoobiya. – Bogga Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Xaalada Dalka Itoobiya.
Wasiirka difaaca Dowladda Itoobiya ayaa shir Jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Addis Ababa ku sheegay in xaaladda degdegga ah ee wadanka Itoobiya lagusoo rogay Jimcihii lasoo dhaafay uu dhaqan galay islamarkaana uu socan doono 6 bilood oo xiriir ah.
Siraj Fegessa oo ah wasiirka G/dhigga ayaa wariyaasha u sheegay in aan la aqbali karin dalabaadkii ka imaanayay Mucaaradka oo ahaa in ladhiso dowlad KMG ah wuxuuna sheegay in dhammaan hay’adaha dowladda ay si caadi ah u shaqeyn doonaan.
Kooxaha Mucaaradka ayuu ugu goodiyay in tallaab adag laga qaadi doono islamarkaana ciidamada Booliska awood loosiiyay in ay qaban karaan ama joojin karaan cid walba oo looga shakiyo in ay abaabulayso dibad bax ka dhan ah dowladda.
“Wadanku xaalad degdeg ah ayuu galay muddo lix bilood ah, golaha baarlamaanka ayaana ansixin doona muddo 15 maalmood gudahood ah, ciidamada melleteriga iyo kuwa ammaanka waxaa awood loo siiyay in ay qaban karaan cid walba oo laga shakiyo iyagoo aan cidna fasax weydiisan” ayuu yiri wasiirka difaaca Itoobiya.
Dolwadda Xabashida Itoobiya ayaa cagta saartay dhabbihii qaras ka xoornimada ee awoodda u adeegsanayay dadka kacdoonka shacbiga ah wada waxayna isticmaalaysaa siyaasad lamid ah middii ay qaadatay sanaddii 2016 oo ahaa daminta kacdoonka iyadoo aan wax isbedel ah sameyn.
Khamiistii lasoo dhaafay ayuu iscasilaad ku dhawaaqay R/wasaarihii wadanka Hailemariam Desalegne kadibna xisbiga talada haya ayaa aqbalay iscasilaadda ka timid R/wasaaraha, baarlamaanka Itoobiya ayaa lafilayaa in laba bilood gudahood uu R/wasaare cusub kusoo magacaabo.
Khilaaf daran ayaa la sheegay in uu ka dhax jiro xisbiga talada haya kaas oo wadanka maamulayay lagasoo bilaabo sanaddii 1991-dii xilligaas oo lariday Nidaamkii Mangiste.